Baaq ku wajahan xuska dhalinyarada Qaranka Somaliland |
Baaq ku wajahan xuska dhalinyarada Qaranka Somaliland
Taariikh: 19/02/2017, Tixraac: SSE/DK 056/19022017
Dallada SSE oo ay ka bahoobeen ururada Somaliland ee Yurub waxa ay baaqan idinkula wadaagayaan muhimada ay leedahay xuska maalinta dhalinyarada Qaranka Somaliland.
Maalinta Isniinta oo ke beegan labaatanka February (20 February 2017) waa maalinta Qaranka Somaliland u asteeyay dhalinyarada Somaliland. Marka hore Dallada SSE waxay dhammaan dhalinyarada Somaliland ee dalka gudihiisii iyo kuwo dibadaba u soo gudbinayaan hambalyo diiran.
Waa maalin ku suntan halgankii dhagaxtuurka oo taariikhdiisu ay dib ugu noqonayso markii dhalinyaradii wakhtigaas ay ka gadoodeen xadhigii iyo xukunkii dilka ahaa ee lagu xukumay qaar ka mid ah dhalinyradii reer Somaliland oo dambi looga dhigey markii ay isku xilqaameen wax ka qabashada dayaca haystay meelaha bulshada looga adeego oo dhakhtarka Hargeysa u horreeyay.
Halgankii maalintaa bilwodey ilaa maanta waa mid haysta dhalinyarada reer Somaliland. Dallad ahaan waxa aanu ogsoonahay in dhalinta reer Somaliland ay yihiin mustaqbalka maanta iyo ka berito ee dalka iyo dadka. Wanaaga Somaliland waa mid ku xidhan kolba sida uu u hagaago mustaqbalka dhalinyaradu.
Dallada SSE waxa ay baaqan idinkula wadaagaysaa dareen ah sidii Xukuumadda Somaliland ay mudnaan gaar ah u siin lahayd horumarinta waxbarasho iyo ta shaqo ee da’ yarta Somaliland. Dalladu iyada oo aan ka tagsanayn duruufaha guud ahaan ku gedaaman Somaliland ee ay u horreyso aqoonsi la’aantu ayaa haddana waxa waajib koowaad iyo mid labaadba inaga saaranyahay in fiiro gaar ah loo yeesho qaybta ugu mudan Bulshada Somaliland oo ah dhalaanka iyo dhalinyarada Somaliland.
Waxaynu ka warhaynaa dagaalka lagula jiro dhalinyaradeena ku sugan duruufaha qalafsan ee shaqo la’aantu ka mid tahay. Waxa hubaal ah in mid ka mid ah dagaalada lagu hayo Somaliland uu ugu weynyahay ka ku aadan sidii loo daciifin lahaa wadaninimadooda iyo jaceylka ay u hayaan Somaliland. Warbaahinta iyo baraha bulshada ayaad si sahlan uga fahmi kartaan dagaalka joogtada ah ee lagu hayo dhalinta, kaasoo ku aadan faafinta bulsho mid ah oo wadaagta diin, af iyo suugaan isku mid ah. Waxa jira dhaqaaqyo iyo NGO loo sameeyay sidii ay u sahli lahaayeen faafinta iyo wacyi gelinta dhalinta si loo daciifiyo fikirkooda ku aadan aaminsanaanta jiritaanka Somaliland. Qoddobada soo socda ayay Dalladu aaminsantahay inay qayb ka yihiin in dhalinyarada Somalilanad qaar ka mid ah looga faa’iideytso dhinacyada taban:
– Bilaabida wada-hadalkii Somaliland iyo Soomaliya iyo wax ka bedelkii xeerkii ka yaalay arrimaha Somaliland iyo Soomaliya oo si khaldan looga faa’iideystay.
-Feejig la’aanta iyo xil-gudasho la’aanta Dawladda iyo Ha’ayadaha Qaranka, gaar ahaana kuwa u xil-saaran dhinaca isu-socodka labada waddan.
-Muranka siyaasiyiinta iyo isku eedaynta mabda’a Soomaliweyn, taas oo xayeysiis iyo ii-dheh u noqotay faafinta mabda’a Soomaliweyn iyo iyada lagu mashquuley hawlo mudnaantoodu ay aad uga hooseyso halka loo baahanyahay in la higsado.
-Guud ahaan iyada oo laga seexday wacyi gelinta dhalinyarada iyo sidii loo xoojin lahaa aaminsanaanta qadiyadda Somaliland isla markaana loo abuuri lahaa tashiilaad iyo kaabayaal ka shaqeeya horrumarinta arrimaha dhalinyrada Somaliland.
Baaqan kooban waxa ay Dalladu idinkula wadaagsyaa isla markaana idinkula dardaarmaysaa in wakhti kasta uu taaganyahay halganka dhalinyaradu iyo inay ka midho dhaliyaan sidii mustaqbalkoodu u noqon lahaa mid hagaagsan. Halganka Somaliland ay ugu jirto horumarkeeda waxa qayb libaax ka ah sidii ka dhalinyarada loola shaqeyn lahaa. Waa lama arrimood oo mahuraan isku ah in si wadajir ah looga wada shaqeeyo.
Dhalinta Somaliland markale hambalyo ayaanu leenahay, waxa aanu Dallad ahaan u rajaynaynaa mustaqbal wacan.